အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ကျွန်တော်နှင့် ပြည်တွင်းစစ်
တိုက်ပွဲကား စလေပြီ။ စစခြင်းမှာပင် တိုက်ပွဲ၏အရှိန်သည် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ပြင်းထန်လှပါတယ်။ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် သဲသဲမဲမဲ အငြိုးတကြီးဖြင့် တိုက်ခိုက်ကြလေသည်…။ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းသည် ကြီးမားသလောက် ထိုတိုက်ပွဲ၏ ပြင်းထန်မှုသည်လည်း ကြောက်မက် ဖွယ်ရာ ကောင်းလှပါတယ်…။ ထူးဆန်းသည်မှာ ယခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့် နှစ်ဘက်သော ပြိုင်ဘက် (သို့) ရန်သူများသည် အတူတကွ မွေးဖွားရှင်သန်လာခဲ့ကြသော၊ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်များ ဖြစ်ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်…။ ၎င်းတို့ကား….
“ဖြစ်ခြင်တာ”နှင့်“ဖြစ်သင့်တာ” တို့ဖြစ်ကြလေသည်….။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ စစ်မြေပြင်ကား “ဘ၀” ဖြစ်ပေသည်။
တိုက်ပွဲစစခြင်းမှာပင် "ဖြစ်သင့်တာ" ဘက်မှနေ၍ ယုတ္တိဗေဒ၊ လက်တွေ့ဆန်ခြင်း၊ အကျိုးအကြောင်း စသည့် လက်နက်ကြီးများဖြင့် စတင်ပြစ်ခတ်လေသည်။ ၎င်းလက်နက်များသည် လူသားဆန်စွာရှင်သန်ခွင့် အဖွဲ့အစည်း မှ “လူသားမဆန်သော လက်နက်များ” အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသော လက်နက်များဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အချစ်နှင့်စစ်တွင် မတရားတာမရှိဟူသော သဘောတရားအရ မိမိတို့ဘက်မှ ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ရရှိစေ ရန်အတွက် သူတို့ ထုတ်သုံးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့လက်နက်ကြီးများဖြင့် အဝေးမှ ပစ်ခတ်ကြရုံသာမက ရန်သူဘက်မှ တပ်သားများ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေရန် “ရာထူးဂုဏ်ရှိန်၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု၊ ပြည့်စုံ ကြွယ်ဝမှု” အစရှိသော လူအများ အလွန်တရာနှစ်သက်သည့် ၀ါဒများကို အဆက်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ကာ (Propaganda Warfare) ဆင်နွှဲခြင်း၊ (Emotion Killer) ဟု စကားဝှက်ပေးထားသော ရန်သူတပ်သားများ၏ ခံယူချက်နှင့် စိတ်ဓာတ်များအား အနီးကပ်ဖျက်ဆီး တိုက်ခိုက်မည့် အထူးကွန်မွန်ဒိုတပ်ဖွဲ့များကို စေလွှတ်ပြီး တိုက်ခိုက် စေခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ပါတော့တယ်…။
"ဖြစ်ခြင်တာ" ဘက်မှလည်း တစ်ဘက်က ပစ်ခတ်သမျှ လက်နက်ကြီးများအား မျှော်လင့်ခြင်းခံတပ်များဖြင့် ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် ခုခံကြပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါ အခွင့်အရေးသာသောအခါများတွင်မူ ၎င်းတို့ဘက်မှလည်း နှစ်ပေါင်း များစွာ သိမ်းဆည်းထားသော အင်အားပြင်းထန်သည့် မြိုသိပ်မှုများ၊ အကြိမ်ကြိမ် စောင့်စည်းခဲ့ရသော လိုက်လျောညီထွေစွာ နေထိုင်ရခြင်းဆိုသည့် လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပြန်လည် ပစ်ခတ်ကြပါတယ်။ ရန်သူဘက်မှ အပစ်အခတ်ကျဲသွားသော အခါများတွင်မူ ခံစားချက် လက်နက်ငယ်များဖြင့် တရစပ်ပစ်ခတ်ကာ ရန်သူအား ခေါင်းမထောင်နိုင်စေရန် ဦးနှိမ်ပစ်ခတ်ကြပါတယ်။ ရန်သူဘက်မှ တိုက်ခိုက်လာသော (Propaganda Warfare) အား (Counter Attack) ပြုလုပ်သည့် အနေဖြင့် “ လူသားဆန်ခြင်း၊ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်ခံစားခွင့်” အစရှိသော လွတ်လပ်ခြင်း ၀ါဒများကိုဖန်တီးကာ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်…။ ရန်သူ့ဘက်မှ တိတ်တဆိတ် စေလွှတ်လိုက်သော မိမိ၏အားထားရသော ခံယူချက် စစ်သားများအား အနီးကပ် လုပ်ကြံမည့် သူလျိုများ၏ရန်မှ ကာကွယ်ရန်အတွက် သတိဟူသော အချက်ပြ Sensor ပစ္စည်းများကို မိမိနယ် မြေအတွင်း တပ်ဆင် ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်…။
ဤသို့ဖြင့် တိုက်ပွဲ၏ ပြင်းထန်မှု အရှိန်သည်လည်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုပြီးတော့သာ ပြင်းထန်လာခဲ့ ပါတော့တယ်…။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ဘ၀စစ်မျက်နှာပြင်မှာလည်း ကြည့်ရက်စရာ၊ ရစရာမရှိအောင်ကို ပျက်ဆီးယိုယွင်း နေပြီဖြစ်ပါ တယ်..။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ဒေသတစ်လျောက် စစ်ပွဲတွင် အသုံးပြုသော လက်နက်များ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ကြောင့် ပျော်ရွှင်ခြင်း သစ်ပင်ပန်းမန်များ အစရှာမရအောင် မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်ခဲ့ရပါတယ်..။ စစ်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပြီဆိုပါကလည်း စစ်တို့၏ထုံးစံအတိုင်း စစ်ရဲ့ဒဏ်ကို အဆိုးရွားနဲ့ အပြင်းထန်ဆုံးခံစားရသူများမှာ အပြစ်မဲ့ သော ကြည်နူးခြင်းဆိုတဲ့ ပြည်သူများ ပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ကြည်နူးခြင်း၊ သာယာဖွယ်ကောင်းခြင်း အစရှိသော တိုင်းရင်းသား ပြည်သူအပေါင်းတို့သည်လည်း စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကို တစ်စစနဲ့ စွန့်ခွာခဲ့ကြခြင်း၊ တိုက်ပွဲများ ကြောင့် သေကြေပျက်ဆီးခဲ့ရခြင်း အစရှိသော အကြောင်းအရာများကြောင့် စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ဒေသတစ်ခုလုံးမှာ သုတ်သန်တစ်စပြင်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတော့တယ်…။ ယခင်က နွေးထွေးမှု နေရောင်ခြည်ဖြင့် စိမ်းလန်းစွာ လှပ ခဲ့ဖူးသော နှလုံးသားမြက်ခင်းပြင်များ သည်လည်း ယခုဆိုလျှင် အနီရောင်နာကြည်းချက်သွေးများဖြင့် ဖုန်းလွှမ်း ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်...။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တိုက်ပွဲကား မည်သူ့မျက်နှာကိုမှမထောက် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားဆဲ၊ တိုက်ခိုက်နေဆဲ ပင်ဖြစ် ပါတယ်…။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ အနိုင်အရှုံး မသဲကွဲသေးသမျှ ဆက်လက်တိုက်ခိုက် နေကြအုံးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီတိုက်ပွဲကို ဘယ်သူတွေစခဲ့တာလဲ…? ဘယ်သူတွေမှန်လဲ…? ဘယ်သူတွေမှားလဲ….? ဘယ်အချိန်ကစခဲ့တာလဲ…? ဘယ်အချိန်မှာ ပြီးဆုံးမလဲ…? အရာရာဟာ မှုန်ဝါးဝါးနဲ့ မပြတ်မသားရှိနေဆဲပါ…။
"ယောနိသော မနသိကာရ" ဆိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖန်ဆင်းရှင်တစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀တွေ ထဲမှာ မမွေးဖွားနိုင်သ၍ ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေအုံးမှာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်….။
p.s- နေရာဒေသ အသီးသီးတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားနေကြသည့် လက်နက်ကိုင်သော၊ လက်နက်မကိုင်သော အစရှိသည့် ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ဆင်နွှဲနေကြသည့်စစ်ပွဲများ အမြန်ဆုံး ချုပ်ငြိမ်းနိုင်ကြပါစေ..။
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:48 PM
It was great to read and glad the fact your post is more clear and eyes catching as all the posts typing before wasabit tight and close.
Now more clear..., Keep Rolling!!
NGE NGE said...
*ayan mite tal *
"POETIC WRITTING", I LIKE IT.
I ADMIRE THE EXPRESSIONS AND FORMATION.
YOU CREATED VERY BEAUTIFULLY TO " THIS " HIDEOUS ONE....
PEOPLE GO MAD BECAUSE OF " THAT "
I'M BATTLING WITH IT TOO.....
့ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်သင့်တာ မတူတဲ့လူတွေအတွက် သူတို့ ရင်ထဲမှာပြည်တွင်းစစ်တွေအမြဲရှိနေမှာပါ
ဖြစ်ချင်တာ နဲ့ဖြစ်သင့်တာ တစ်ထပ်တည်းကျတဲ့ ကံကောင်းတဲ့ လူနည်းစုအတွက်တော့ ဒီစစ်ပွဲတွေ မရှိပါဘူး
ဖြစ်ချင်တာ နဲ့ဖြစ်သင့်တာ တစ်ထပ်တည်းကျပါလျက်နဲ့ ဖြစ်နေတာကို လက်ခံထားရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲမှာရော ဘယ်လိုစစ်ပွဲမျိုးတွေ ရှိနေမလဲ.....:(
:) good bro ! :D
May 31, 2008 at 3:42 AM
သိဝူးကွာ။ ဒို့ကတော့ ဖြစ်ချင်တာ ဘက်က ပစ်ကူပေးမယ်။ :D အရမ်းမိုက်တယ်။ CHEERS !
Good post... (home!)
Great thoughts & skillful writing Bro!
May 31, 2008 at 5:53 AM
ဒါပေမဲ့ လူတွေက ဖြစ်သင့်တာထက် ဖြစ်ချင်တာက များနေတယ်။
ပိုစ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုထဲရောက်ရှိနေသလိုခံစားရတယ်။
ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်လို့ ထင်တယ်း) အဖြစ်ပျက်လေးကို တိုက်ရိုက်မဖော်ပြပဲ ဥပမာပေးခိုင်းနှိုင်းသွားတာ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ် တရားသဘောတွေတောင်ထည့်လိုက်သေးတယ် ဟားဟား ဒီစစ်ပွဲမှာ ၂ ဦးစလုံးက နှလုံးသားတွေနဲ့အရင်ဆုံး meeting လေးတစ်ခုလောက်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်ချင်တာတွေ တာ ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ဒီလိုမှမဟုတ် ဦးနှောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီး မာနတွေက တွန်းအားပေးနေမယ်ဆို၇င်တော့ ဖြစ်ချင်တာတွေက ဖြစ်သင့်တာတွေထပ်ဆိုးဝါးပြီး တိုက်ပွဲအ၇ှိန် ပိုကောင်းလာမှာပဲ ။ နှလုံးသား မြက်ခင်းပြင်များ အနီရောင် နာကြည်းချက်သွေများဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ရတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာ ။
P.s=ကြားဖူးတာလေး ခွှင့်လွှတ်ခြင်းသာ ငြိမ်းချမ်းရာ အစစ်မှန်တဲ့း)
Black ရေ... ငါမင်းကို ပြောဖူးလား မသိဘူး။ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် အာဏာရှိသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အာဏာမရှိသူပဲဖြစ်ဖြစ် အတ္တပရ မျှတရတယ်ကွ။ တစုံတယောက်က အတ္တသိတ်ကြီး လာရင် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပြဿနာတက် တော့တာပဲလေ။ ဒီနေရာမှာ မင်းပြောတဲ့ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာက အတ္တကွ၊ အေး... ဖြစ်သင့်တာက ပရပဲလေကွာ။ ဗမာလို ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကိုယ်ကျိုးနဲ့ အများအကျိုးပေါ့။ သုံးသပ်ဖို့နဲ့ ဆင်ခြင် စဉ်းစား ဖို့ပါကွာ။
ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ရောင်နီဦးကို ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကမျှော်နေကြတာကြာခဲ့ ပါပြီ..။
ူLIVE THE LIFE YOU LOVED AND LOVE THE LIFE YOU LIVED တဲ့လေ
only gorgeous man 've got those kind of sexy ideas. Very very seductive, bro.
ကဲ စိတ်ကို လျှော့လိုက် တင်းလိုက်နဲ့ အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းဖို့ ကြိုးစားကြည့်ဦးမယ်ဟေ့
wonderful writings, versatile thoughts!
၀ိုးဟိုးဟိုးးးးးးးးးးးးးးးး ဘာမှမှမဖြစ်ချင်တဲ့ဘက် စစ်ကူပစ်ပေးလိုက်မယ် ... ဟတ်ဟတ် ကောင်းတယ် ဘလက်ရေ
မင်းအိမ်မက်တွေ နက်လေ ကောင်းလေပဲ ..။
အနော်လည်း လက်နက်တွေ မဲ့ တဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နယ်မြေလေးကို တောင့်တနေတယ် ။
Wow!! great.You are rock.
ခိုင်းနှိုင်းတင်ပြပုံရော ရေးသားပုံပါ ပြောစရာမရှိအောင် ကောင်းပါတယ် မောင်လေးရေ။ အားလုံးကို အံဝင်ခွင်ကျ သရုပ်ဖော်သွားတာ တကယ်ပညာပါ ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖန်ဆင်းရှင်တစ်ယောက် မွေးဖွားပြီး ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်သင့်တာတို့ရဲ့ စစ်ပွဲပြီးတဲ့တစ်နေ့ စိမ်းလန်းလှပတဲ့မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာ ကြည်နူးခြင်းပြည်သူတွေ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းကြမယ့်နေ့ကို လူတိုင်း မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ စာကောင်းတွေအတွက် အမြဲလေးစားနေပါတယ် မောင်လေး blackdream ရေ။
လန်ထွက်နေတာပဲ သယ်ရင်း မင်းစာရေးစရာ လုပ်စားရင် တော်တော်ကောင်းမှာ။တကယ်ပြောတာ :P